Wararka Maanta: Khamiis, Sept 27, 2012-Hay'adda Nabadsugidda Gobolka Banaadir oo soo bandhigay dad fara badan oo lagu soo Qabtay Howgallo laga Sameeyay Muqdisho
Taliyaha ciidamada nabadsugidda gobolka Banaadir ayaa sheegay in baaritaano ay ku sameeyeen dhallinyarada ay 30 ka mid ah ku waayeen dambiyadii loo haystay, halka inta kalena ay weli ku wadaan baaritaanno, wuxuuna u digay milkiilayaasha iska leh guryaha ku yaalla Muqdisho.
"Howgallo 24-kii saac ee ugu dambeeyay aan ka sameynay Muqdisho ayaa waxaa lagu soo qabqabtay 80 qof, waxaana ku jira kuwo qirtay inay Al-shabaab ka tirsan yihiin, ayna lug ku lahaayeen falalkii ammaan-darro ee dhowrkii maalmood ee lasoo dhaafay ka dhacayay Muqdisho," ayuu yiri Col. Khaliif Axmed Ereg oo shir jaraa'id qabtay maanta.
Sidoo kale, Col. Ereg wuxuu sheegay in howgalladu ay socon doonaan inta laga xaqiijinayo ammaanka guud ee caasimadda Soomaaliya, wuxuuna sheegay in cid walba oo ay qabtaan ay marin doonaan baaritaanno, ciddii uu shaki weyn ka galana ay u gudbinayaan maxkamadaha dalka.
Dhanka kale, taliyuhu wuxuu sheegay in gurigii laga helo hub ama laga soo qabto qof ka tirsan Al-shabaab ay dowladdu la wareegi doonto, isagoo xusay in milkiilayaasha iska leh guryaha ku yaalla Muqdisho looga baahan yahay inaysan cid walba guryahooda ka kireyn, ayna sharciga maraan marka ay guryaha kireynayaan.
"Milkiilayaasha guryaha waxaan ugu baaqaynaa inay saldhigyada iyo degmooyinka geeyaan dadka ay guryaha ka kireynayaan, haddii kale waxaa dhacaysa in haddii laga helo guryahooda hub ama xubno ka tirsan Al-shabaab, waxaa gurigaas si toos ah ula wareegaysa dowladda," ayuu yiri taliyaha nabadsugidda gobolka Banaadir.
Howgalladan dadka badan lagu soo qabqabtay ayaa waxay imaanayaa xilli ay ay ka dhacayeen Muqdisho toddobaadyadii ugu dambeeyay qaraxyo iyo dilal qorsheysan oo ay naftooda ku waayeen dad ku dhow 50-qof oo ay ku jireen suxufiyiin.